HomeWarka Xiisaha LehWararka Suuqa kala iibsiga Maanta: Mbappe, Haaland, Vlahovic, Christensen, Henderson, Carroll
January 15, 2022 Warka Xiisaha Leh, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha, Wararka Wargeysyada 0
Kylian Mbappe oo 23 jir ah ayaa wadahadalo heshiis kordhin ah kula jira kooxda Paris St-Germain. Weeraryahanka reer France oo 23 jir ah ayaa la filayay in uu beeca xorta ah ugu biiro kooxda Real Madrid marka uu heshiiskiisu dhaco dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Telegraph)
Erling Braut Haaland ayaa sheegay inay ku cadaadinayaan Borussia Dortmund inuu go’aan ka gaaro mustaqbalkiisa. Kooxo badan oo magac ku leh qaarada Yurub ayaa lala xiriiriyay 21-jirka weerarka uga ciyaara Norway. (Mirror)
Fiorentina ayaa ku dhow inay aqbasho dalab 58 milyan ginni ah oo ka yimid Arsenal oo ku aadan 21 jirka weerarka uga ciyaara Serbia Dusan Vlahovic. (La Repubblica)
Bayern Munich iyo Barcelona ayaa xiiseynaya saxiixa daafaca Chelsea iyo xulka Denmark Andreas Christensen, oo 25 jir ah, marka uu qandaraaskiisu dhaco dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Fabrizio Romano)
Tababaraha Tottenham Antonio Conte, oo qandaraaskiisu dhacayo ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda, ayaa diiday inuu damaanad qaado mustaqbalkiisa, waxaana uu sheegay inuu diirada saarayo waqtiga xaadirka ah. (Mirror)
25-jirka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Tottenham ee Tanguy Ndombele ayaa iskiis u tababaranaya, mustaqbalkiisa Spurs ayaa shaki la galinayaa. (Football London)
Manchester United ayaa xiriir la samaysay tababaraha Inter Milan Simone Inzaghi oo ku saabsan suurtogalnimada uu kula wareegayo xagaagan, iyadoo tababaraha reer Talyaani uu bilaabayo koorsada luqadda Ingiriisiga oo degdeg ah. (Corriere Dello Sport)
Southampton ayaa wax ka weydiisay saxiixa 24-jirka Manchester United goolhayaha reer England Dean Henderson bishaan. (FootballInsider)
Southampton ayaa doonaysa in ay amaahda Armando Broja ee Chelsea u badasho heshiis joogto ah, inkasta oo ay u badantahay in ay tartan kala kulmaan 20 jirka weerarka uga ciyaara Albania. (Sky Sports)
Arsenal ayaa wadahadalo horumar leh kula jirta Juventus oo ay ku doonayso 25 jirka khadka dhexe ee reer Brazil Arthur Melo amaah lix bilood ah. (Telegraph)
Newcastle United iyo Watford ayaa xiiseynaya 24 jirka garabka uga ciyaara Nantes Ludovic Blas. (dailystar)
Wolves ayaa diyaar u ah inay dhageysato dalabaadka 30-jirka reer Ivory Coast daafaca Willy Boly, kaasoo la filayo inuu ka soo laabto dhaawac kubka ah bisha soo socota. (Dailymail)
Tottenham ayaa wax ka waydiisay helitaanka 19 jirka khadka dhexe ee Peterborough ee Benjamin Mensah. (Peterborough)
Tottenham ayaa Wolves u soo bandhigtay afar ciyaartoy si ay qayb uga hesho 25 jirka garabka uga ciyaara Spain Adama Traore. (Teamtalk)
Barcelona ayaa diyaar u ah inay iska iibiso 21 jirka daafaca uga ciyaara Mareykanka ee Sergino Dest bishaan si uu uga caawiyo dhaqaale uruurinta weeraryahan cusub, iyadoo Chelsea iyo Bayern Munich ay xiiseynayaan. (ESPN)
Flamengo ayaa u soo bandhigtay Manchester United 8 milyan ginni si ay amaah uga dhigto 26 jirka reer Brazil Andreas Pereira amaah joogto ah. (Thesun)